Labbo boqol oo fiisayaasha dal ku galka Iswiidhan oo la lunsaday | Somaliska
Labbo boqol oo fiisayaasha dal ku galka Iswiidhan oo la lunsaday
Telefeeyshinka dalkan Iswiidhan ee SVT, ayaa shaaca ka qaaday in labbo boqool oo fiisaha dal ku galka ah la waayey meel ay ka baxeen ama la xaday. Laanta socdaalka ayuu telefeyshinku sheegay in haatan baaritaan uu ku hayo iyadoo eeysan jirin cid toos ah oo farta loogu fiiqayo.
Bishii nofeembar ee sanadkii ayaa ciidanka ilaaladdu waxaa ay qabteen qof heeysta dokument aan sax aheyn oo ay ku taalay sumad fiiso safaaradeed, oo ah mid qofka marka la siiyo dal ku galka fiisahu oo ay ku shaabadeeysan tahay. Laanta socdaalka oo haatan amuurtan baaritaan ku haya ayaa ku tilmaamay “suuq qiimo” oo loola jeedo suuq madoow oo halkii fiiso lugu iibsanyo 20.000 (labaatan kun) oo doolar. Laanta socdaalka waxaa kale oo ay sheegeen in labbo boqol oo xabbo oo fiisayaal ah la waayey meel ay ka baxeen sanadkii 20016-kii
“Waa arrin halisteeda leh noqon kartana in ay adeegsadaan koox dambiilayaal ah” ayuu yiri Gunnar Fröberg oo tilmaamayey walaaca laga qabo xatooyadda fiisayaalka Iswiidhan oo ay dhici karto in gacanta u gasho kooxo qowleeysato ah.Dhinaca kale safaaradda haatan baaritaan ku socdo ee tuhunka laga qabo ayaa laanta socdaalku sheegeen ineey runsan yihiin in toddobaatan qalad oo fiisayaal ah la siiyey dad asalkood yahay afgaanistaaniyiin. Baaritaankan ayaa keenay in markii dambe uu shaqado iskaga tago howl wadeen ka tirsan safaaradda islamarkaasina dacwad lugu soo oogay. Warkan oo uu faafiyey raadiyo Iswiidhan qeybteeda wararka u qaabilsan ee Ekot.
“Ninkani haatan ma heeysto kalsoonideena” ayuu yiri Magnus Rodin oo ah madax waaxeed ka tirsan laanta socdaalka, oo ka hadlaya ninka haatan farta ku godan tahay ee loo maleeynayo in uu ka dambeeyo bixinta fiisayaal qalad ah. Waaxda arrimaha dibadda iyo laanta socdaalka baaritaanka weli ma ku cada cid si toos ah farta loogu taagay oo la xirriira fiisayaasha la xaday, balse laga gudbiyey dacwad. Ugu dambeyntiina safaaradan ayaa ka howlgala howlwadeenno ka kala tirsan waaxdda arrimaha dibadda iyo laanta socdaalka. Howl wadeenka laga shakiyeyna waxaa uu iska fogeeyey kiiskaas lugu soo eedyey sida qareenkiisa sheegay.
Dhibaatada Khaatka: Nin Soomaali ah oo xabsi lagu xukumay
Forex waa bankiga kaashka laga helo